Sanca oo laga mamnuucay mootooyinka - BBC News Somali
Sanca oo laga mamnuucay mootooyinka
1 Disembar 2013
Masuuliyiinta Yemen, ayaa ka mamnuucay mootooyinka magaalo madaxda Sanca laba toddobaad si loo joojiyo dil soo kordhay. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in mamnuucidan ay jiri doonto ilaa December shan iyo tobankeeda, si ammaanka iyo degenaashaha loo adkeeyo.
Wararka ka imaanaya Sanca ayaa sheegaya in mamnuucida loo hogaansamay iyadoo mootooyin aysan jidka marayn..
Toddobaadkii hore ayaa niman hubaysan oo Mooto saaran ay fakadeen, kadib markii ay dileen qabiir ku xeeldheer milatariga ajnabiga. Maalmo kahorna waxaa la dilay xildhibaan. Mamnuucidan ayaa la soorogay bishii Maarso markii ay socdeen shirka wadahadalka qaranka.